FITSARAM-BAHOAKA TANY FENOARIVO ATSINANANA :: Vehivavy no voalaza fa nampirisika ny famonoana ireo pôlisy telo lahy • AoRaha
FITSARAM-BAHOAKA TANY FENOARIVO ATSINANANA Vehivavy no voalaza fa nampirisika ny famonoana ireo pôlisy telo lahy
Miara-manao famo­torana an’ireo olona miisa iraika amby roapolo voasambotra, izay voarohirohy tamin’ny famonoana ireo pôlisy telo, tany Fenoarivo Atsinanana, tamin’ny 24 oktobra lasa teo, ny zandary sy pôlisy misahana ny heloka bevava any Toamasina. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny Pôlisim-pirenena dia “vehi­vavy no niaingan’ny fampirisihana ny hamonoana ireo pôlisy”.
Isan’ireo voasambotra ihany koa ny filohan’ny fokon­tany Ambodihazina, toerana nitrangan’ity famo­noana mpitandro filaminana ity.
Raha tsy misy ny fiovana amin’ny ora farany dia hatolotra ny Fitsarana, anio, any Toamasina ireo olona voarohirohy rehetra ireo. Vita ny famotorana ka notazonina eo anivon’ny Sampana misahana ny heloka bevava eo anivon’ny zandarimaria any an-toerana izy ireo, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny Pôlisim-pirenena.
Vono olona, fikomiana ary halatra no vesatra hiam­pangana ireo olona miisa iraika amby roapolo ireo. Ny roa ambin’ny folo tamin’izy ireo dia voasambotra tany Ambodihazina ary ny sivy kosa dia tany Fenoarivo Atsinanana. “Araka ny fanambaràna nataon’ireo olona ireo tao anatin’ny fanadihadiana sy ny voafaritra fa fiaiken-keloka nataon’ny sasany tamin’izy ireo dia mbola tsy maintsy hitohy ny famotorana ity raharaha ity. Hahakasika olona hafa ihany koa izany”, hoy hatrany ny avy amin’ny Pôlisim-pirenena.
LALAO « KAPSILINAKA » :: Lasan’ny mpandray anjara avy any Toliara ilay fiara faharoa